Adobe Proto: Aka Prototyping na gị Mbadamba ụrọ | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 22, 2011 Douglas Karr
Adobe malitere ulo nke emetụ ngwa dakọtara na gam akporo mbadamba. Ọ dị mma na Photoshop, Mbido, Echiche na Kuler na-aga mbadamba ụrọ ma bụrụ nke kachasị maka interface mmetụ aka, mana ejighị m n'aka na m nwere ike ịba aka m n'ụzọ m site na ha wee rụpụta ọrụ (ọkachasị ebe m na-ackụ ara. na Photoshop).
Otu ngwa, jikọtara na Adobe Creative Cloud nke ahụ pụtara nnọọ na m bụ Adobe Proto. Ikike abụba Finder a ọrụ interface layout bụ ịrịba. Anyị na-eji Onyeka Onwenu ugbu a na-ahụ n'anya na mmekota ike. Agbanyeghị, Proto bụ ngwa ịtụnanya… ọkachasị $ 10.
Ana m atụ anya ịhụ Adobe Proto ka ọ gaa iPad!
Tags: Adobe Adobe Cloudadobe protombadamba
zuo ohi g
Feb 4, 2012 na 4:41 PM
Ajọ & ngwaahịa jọgburu onwe ya! Ikwesiri iji igwe ojii ha $ 149 / ọnwa iji nwee ike ịkekọrịta faịlụ na pc, ị nweghị ike ịchekwa faịlụ ahụ na mbadamba gị ma jiri sdcard ma ọ bụ usbdrive, ma ọ bụ zitere ya ozi.
E nwere ọtụtụ ndị ọzọ free ọzọ na ka ị na-eme otu ihe ahụ free na nyefee faịlụ free.
Ekwuru m Adobe ọtụtụ oge, ọbụlagodi ndị ọrụ ha enweghị isi, ha nwere ndị otu gam akporo, mana ha amaghị ọtụtụ, ma ọ bụ tupu ahịa, ma ọ bụ nkwado teknụzụ. N'ikpeazụ mgbe izu 1 gasịrị, enwetara m email na-ekwupụta na ọ gaghị ekwe omume ịkekọrịta faịlụ na mpụga ọrụ igwe ojii ha dị oke ọnụ.
Mgbe ahụ 90% nke ndị na-eji ya enweghị ike ịnweta faịlụ ha iji bulie igwe ojii. Adobe anaghị enyere ha aka, yabụ ndị ọrụ enweghị azịza ya, nsogbu teknụzụ edozighi na adobe na nkwado.
Ha kwesiri inye ya n'efu maka 10GB ma ọ bụ ihe, ngwa ndị a bụ ọdịda maka nke a, egbula ego gị.
Feb 5, 2012 na 7:06 PM
@ google-dff452fb3bf20c4d2d9780305703bb9f: disqus - daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta ozi ahụ! Nke ahụ jọgburu onwe ya. M na-amalite na-eche ma Adobe nwere obere nsogbu nke amata.